Home » Creative Writing » တမူထူးခြားတဲ့ ဆဒ္ဒန်ဂူ …
ဘုရင့်ညီဂူက ဘားအံမြို့ထဲမှာ မဟုတ်ဘူးလားလို့
ဘုရင့်​ညီဂူက သထုံ ဘားအံ အလယ်ှာ ရှိပါတယ်​။ သထုံက​နေ ၁၃ မိုင်​ပဲ ​ဝေးပါတယ်​။
Mikko ကြော်ငြာရိုက်တဲ့ နေရာလေလား
သွားချင်တဲ့အထဲမှာ ဆဒ္ဒန်ဂူနဲ့ ဘုရင့်ညီဂူပါတယ်။
.သွာလည်ချင်စရာပဲ…သဂျီးပြောသလိုပဲ..မဝေ ရိုက်ချက်တွေ မိုက်လာပီ
အေတီဝမ်က ကေအန်ယူ သူလျှိုလား..
ပုံ​တွေက အ​နောက်​ဆုံးက​နေ ​ပြောင်းပြန်​ဖြစ်​သွားတယ်​။
ကရင်​ပြည်​နယ်​အလှအပ​တွေက​တော့ အံ့မခန်းပါ ​နောက်​ပိုင်း လမ်း​တွေကလည်း​ကောင်းလာ​တော့ ခရီးသွား​တွေမျက်​စိကျမယ်​ဆို ကျစရာ​တွေချည့်​ပဲ။
ဟုတ်တယ်ဗျို့.. ။ဘယ်မြို့နဲ့မှ မတူတဲ့ ဒေသခံတွေ…
ကူညီနိုင်တာဆို ကိုယ်ကျိုးစွန့် ကူညီတတ်သေးတယ်..
ကျနော် ဝဲပျံတောင် ပေါ် တက်ချင်တယ်ဆိုတုန်းက…
ကိုယ်ပြောတာလည်း သူနားမလည် ..သူပြောတာလည်း ကိုယ်နားမလည်တဲ့ …ရိုးသားလှတဲ့ ကရင်ကြီးတွေနဲ့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်…ထန်းရည်သောက်ခဲ့ဖူးသဗျ…
ဆိုင်ကယ် ငှားတား ကားငှားတာကအစ…
တနယ်သားတွေ ရိုက်စားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေ မရှိကြဘူးဗျ။
ဘားအံမြို့ပေါ်က ဆိုင်တွေမှာ ကွတ်တယို တပွဲ ၅၀၀ ဆိုတာလည်း..ဗိုက်တင်းအောင် စားရသဗျ…
ကျောက်တောင်နံရံကြီးတွေကို ကွေ့ဝိုက် မြင်နေရတဲ့ သဘာဝအလှကလည်း ဖမ်းစားသဗျ….
အပြန် သံလွင်မြစ်ကူးတံတား ဒီဘက်ထိ ရောက်ပြီး ..ခွဲခွါရချိန်မှာ..သံလွင်မြစ်နဲ့ ဇွဲကပင်တောင်ကြီးကို ကြည့်ပြီး..မခွဲချင်စိတ်နဲ့…လွမ်းမောမိရတာဗျ…
ရန်ကုန်ရောက်ပြီးတာနဲ့..နောက်နေ့တွေဆို…အဲ့မြို့ကို ပြန်လွမ်းပြီး..ထပ်ခါထပ်ခါ သွားချင်မိသဗျ…
ကျနော့်ကို လေးကြိမ်လုံးလုံး…တည်းခို စားသောက်စရိတ်လုံးဝ မယူတဲ့ ကရင်မိသားစု မိတ်ဆွေများကိုလည်း…. ပြောမပြတတ်အောင် ကျေးဇူးတင်မိတာ….
safety first ….. no life jacket.
ဟုတ်​ပ ကထူးဆန်း။ ကျွန်​မနဲ့ အကြံတူ​နေပြီ။
ဘားအံမြို့အနှံ့ကို ၂၄ နာရီနဲ့ သွားလည်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်။
မဝေ ကို မနာလိုဖူးးးးးးးးးး
ရေကူးချင်တယ် ရေတွေ မြင်တော့
ဆဒ္ဒန်ဂူ ကိုတော့ ကြားဖူးတယ်။
ဘုရင်ညီဂူတော့ ရောက်ဖူးပါတယ်။ ဆဒ္ဒန်ဂူတော့ တစ်ခါမှ မရောက်သေးပါဘူး။ လှေနဲ့သွားတာဆိုတော့ ရေကြောက်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါ့မလားမသိဘူးနော်။ တောတောင်သဘာဝတော့ အတော်စိမ်းလန်းစိုပြေပြီး သွားချင်စရာနေရာလေးတစ်ခုပဲ။ ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာ။ အစားအသောက်ကော စားဖို့ ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေ ရှိလားဟင်… ဈေးနှုန်းတွေကော ကြီးလား။
ဘုရင့်ညီဂူတော့ရောက်ဖူးတယ်။ ရေပူစမ်းလည်းရှိတယ်လေ။ ဆဒ္ဒန်ဂူတော့ သွားဖို့တာစူနေတာကြာပြီ ဒါပေမယ့် မရောက်ဖြစ်သေးဘူး။
ဒီမှာလည်း ဓါ့ပုံတွေ မြင်ရ၀ူးးး